ဖြူဖြူထွေးရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ခွန်အားဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ချင်နေပြီဆိုတဲ့ လန်ဒန် – Suehninsi
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဟာသသရုပ်ဆောင် လန်ဒန်ကတော့ ဗီဒီယိုခေတ်ထဲက ရယ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာအမူအယာနဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က သရုပ်ဆောင်လန်ဒန်တစ်ယောက် လေဖြတ်ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲရင်း ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။
အခုတလောမှာတော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းကို ခေတ္တရပ်နားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာတော့ သူ့ကို ဖြူဖြူထွေးက ကြော်ငြာဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ ခေါ်ရိုက်တဲ့အတွက် အနုပညာလုပ်ချင်စိတ်ပြန်ဖြစ်လာတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖြေကြားသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်က သူ့ကို ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာဗီဒီယိုလေးမှာ ခေါ်ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေ လိုလားနေတဲ့ အချက်တစ်ချက် ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပရိသတ်အများစုက သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေကို မြင်တွေ့ရခဲ့ရပြီး ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဖြူဖြူထွေးကသာ သူ့ကိုခေါ်ရိုက်ပေးဖို့အတွက် အားလုံးက ဆန္ဒရှိခဲ့ကြတယ်လို့ လန်ဒန်က ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာဗီဒီယိုထဲက ကာရိုက်တာကလည်း မိမိရဲ့ ပြင်ပဘဝကဲ့သို့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုကို လန်ဒန်က အရွှန်းဖောက်ပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“အဲ့နေ့ကလည်း ဒီကနေပဲ အဲ့ဒီမြောက်ဒဂုံကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲသွားတာ.. အဲ့မှာရောက်တော့ ဟင်… ငါ့ညီမဖြူဖြူရယ်လို့ အဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ငြိလို့များ ငါ့ကို ခေါ်ရိုက်တာလားဆိုတော့ သူလည်းရယ်တယ်… ကိုကြီး အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်. တဲ့… အေးပါလို့… သိပါတယ်လို့… အနုပညာသမားတစ်ယောက်က ဆေးစက်ကျရာ တာဝန်ယူနိုင်ရတယ်”
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာဗီဒီယိုလေးကနေ တစ်ဆင့် အနုပညာပြန်လုပ်ချင်တဲ့ ခွန်အားဖြစ်ဖို့ ပြန်ပြီးအသက်သွင်းလိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်လို့ လန်ဒန်က ဆိုပါတယ်။ “အနုပညာကို ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ချင်တယ်… ပြန်ရိုက်ချင်တယ်.. အတိုလေးတွေက အစဗျာ ကျွန်တော် ပြန်ရိုက်ချင်တယ်”ဖြူဖြူထွေးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လန်ဒန်က အခုလိုလည်း ချီးကျူးထားပါတယ်။
“မြန်တော့ မြန်တယ်နော် သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက… ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ရိုက်ကွင်းကပြီးလည်းပြီးရော ပြန်လာလို့ အိမ်တောင်ပြန်မရောက်သေးဘူး ဗီဒီယိုက လိုင်းပေါ်ရောက်နေပြီ…ဒါကလည်း သူက သူ့ရဲ့တတ်နိုင်တဲ့ လုပ်အားဒါနလေးနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီပံ့ပိုးတာပါ… ထာဝရအောင်မြင်ပါစေ လိုတဲ့ပန်းတိုင် ရောက်ပါစေလို့တော့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်”
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ သရုပ်ဆောင်အလွန်ကောင်းလှတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် လန်ဒန်ကတော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကနေ အနားယူခဲ့ရပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ထူထူထောင်ထောင် ပြန်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လို့ တစ်ခန်းရရ နှစ်ခန်းရရ သူ့ကိုခေါ်သုံးပေးကြပါလို့ အနုပညာဖန်တီးရိုက်ကူးသူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဟာသသရုပ်ဆောင်လန်ဒန်ကို ကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံး ပြန်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပြန်လည်ခေါ်ယူရိုက်ကူးခြင်း ခံရပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းခဲ့ကြပါအုံး။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်။
ပရိသတျကွီးတို့ရေ ဟာသသရုပျဆောငျ လနျဒနျကတော့ ဗီဒီယိုခတျေထဲက ရယျစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာအမူအယာနဲ့ သရုပျဆောငျခကျြမြားကွောငျ့ ပရိသတျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ လအနညျးငယျက သရုပျဆောငျလနျဒနျတဈယောကျ လဖွေတျဝဒေနာကို ခံစားခဲ့ရပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ မိသားစုစားဝတျနရေေးကို ဆိုငျကယျကယျရီဆှဲရငျး ဖွရှေငျးခဲ့ရပါတယျ။
အခုတလောမှာတော့ ကနျြးမာရေးအခွအေနအေရ ဆိုငျကယျကယျရီဆှဲတဲ့လုပျငနျးကို ခတ်ေတရပျနားထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ဒီအငျတာဗြူးလေးမှာတော့ သူ့ကို ဖွူဖွူထှေးက ကွျောငွာဗီဒီယိုတဈခုမှာ ချေါရိုကျတဲ့အတှကျ အနုပညာလုပျခငျြစိတျပွနျဖွဈလာတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ဖွကွေားသှားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လနျဒနျက သူ့ကို ဖွူဖွူထှေးရဲ့ ကွျောငွာဗီဒီယိုလေးမှာ ချေါရိုကျခဲ့တဲ့အတှကျ ပရိသတျတှေ လိုလားနတေဲ့ အခကျြတဈခကျြ ပွညျ့စုံသှားတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ပရိသတျအမြားစုက သူ့ရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ စီးပှားရေးအဆငျမပွမှေုတှကေို မွငျတှရေ့ခဲ့ရပွီး ဒီလိုအခွအေနမှော ဖွူဖွူထှေးကသာ သူ့ကိုချေါရိုကျပေးဖို့အတှကျ အားလုံးက ဆန်ဒရှိခဲ့ကွတယျလို့ လနျဒနျက ရငျဖှငျ့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ ဖွူဖွူထှေးရဲ့ ကွျောငွာဗီဒီယိုထဲက ကာရိုကျတာကလညျး မိမိရဲ့ ပွငျပဘဝကဲ့သို့ ဆိုငျကယျကယျရီသမားတဈယောကျ ဖွဈနတေဲ့ တိုကျဆိုငျမှုကို လနျဒနျက အရှနျးဖောကျပွီး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
“အဲ့နကေ့လညျး ဒီကနပေဲ အဲ့ဒီမွောကျဒဂုံကို ဆိုငျကယျနဲ့ပဲသှားတာ.. အဲ့မှာရောကျတော့ ဟငျ… ငါ့ညီမဖွူဖွူရယျလို့ အဲ့ ကာရိုကျတာနဲ့ငွိလို့မြား ငါ့ကို ချေါရိုကျတာလားဆိုတော့ သူလညျးရယျတယျ… ကိုကွီး အဲ့လိုမဟုတျဘူးနျော. တဲ့… အေးပါလို့… သိပါတယျလို့… အနုပညာသမားတဈယောကျက ဆေးစကျကရြာ တာဝနျယူနိုငျရတယျ”
ဖွူဖွူထှေးရဲ့ ကွျောငွာဗီဒီယိုလေးကနေ တဈဆငျ့ အနုပညာပွနျလုပျခငျြတဲ့ ခှနျအားဖွဈဖို့ ပွနျပွီးအသကျသှငျးလိုကျသလို ခံစားလိုကျရတယျလို့ လနျဒနျက ဆိုပါတယျ။ “အနုပညာကို ကြှနျတျောပွနျလုပျခငျြတယျ… ပွနျရိုကျခငျြတယျ.. အတိုလေးတှကေ အစဗြာ ကြှနျတျော ပွနျရိုကျခငျြတယျ”ဖွူဖွူထှေးနဲ့ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပတျသတျပွီး လနျဒနျက အခုလိုလညျး ခြီးကြူးထားပါတယျ။
“မွနျတော့ မွနျတယျနျော သူ့လုပျဆောငျခကျြတှကေ… ကြှနျတျောအဲ့ဒီကနပွေီးတော့ ရိုကျကှငျးကပွီးလညျးပွီးရော ပွနျလာလို့ အိမျတောငျပွနျမရောကျသေးဘူး ဗီဒီယိုက လိုငျးပျေါရောကျနပွေီ…ဒါကလညျး သူက သူ့ရဲ့တတျနိုငျတဲ့ လုပျအားဒါနလေးနဲ့ တဈဖကျတဈလမျးကနေ ကူညီပံ့ပိုးတာပါ… ထာဝရအောငျမွငျပါစေ လိုတဲ့ပနျးတိုငျ ရောကျပါစလေို့တော့ ကြှနျတျော ဆုတောငျးပေးခဲ့တယျ”
ပရိသတျကွီးတို့ရေ သရုပျဆောငျအလှနျကောငျးလှတဲ့ ဟာသသရုပျဆောငျ လနျဒနျကတော့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ အနုပညာအလုပျတှကေနေ အနားယူခဲ့ရပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာ ထူထူထောငျထောငျ ပွနျဖွဈလာပွီဖွဈလို့ တဈခနျးရရ နှဈခနျးရရ သူ့ကိုချေါသုံးပေးကွပါလို့ အနုပညာဖနျတီးရိုကျကူးသူတှကေို မတ်ေတာရပျခံခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဟာသသရုပျဆောငျလနျဒနျကို ကနျြးမာရေးအကောငျးဆုံး ပွနျဖွဈပွီး ဇာတျကားတှမှောလညျး ပွနျလညျချေါယူရိုကျကူးခွငျး ခံရပါစကွေောငျး ဆုမှနျကောငျး တောငျးခဲ့ကွပါအုံး။ အခြိနျပေးပွီးဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ နျော။
ညီအကိုအရင်းတွေလို တစ်ယောက်နဲ့တယောက် ခင်မင်ရင်းနှီးနေကြတဲ့ စိုးသူနဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ ခင်ပွန်း